यसपालि मल अभाव हुन्न
बर्सेनि हुने रासायनिक मलको अभाव यस पटक हुन नदिने चुनौती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छ । त्यो चुनौती पार गर्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ र आगामी साउन–भदौमा रासायनिक मलको अभाव हुँदैन भन्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन तयारी गरेको बताइएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन समाधान गर्न कारखाना खोल्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । यता बङ्गलादेशबाट जीटूजी सम्झौता गरी मल ल्याउँदैछ भने भारतसँग बेग्लै सम्झौताको तयारी छ । मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग मलको कति आवश्यकता छ त्यसको विवरण पनि मागेको छ । कुन महिना, कुन बालीका लागि कति मल चाहिन्छ त्यसको रोडम्याप पनि बनाएर बसेको छ तर किसानमा भने यस अवस्थामा पनि मलको हाहाकार हुने हो कि भन्ने चिन्ता अहिलेदेखि नै छ । प्रस्तुत छ, यीलगायत समसामयिक विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीसँग गोरखापत्रका लागि सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको अर्थवार्ता ः
कृषि सामग्री कम्पनी सरकारको कम्पनी हो । साल्ट टे«डिङमा पनि सरकारको लगानी छ । दुवै डिलरलाई वितरण प्रणालीमा एकरूपता होस् भनेर निर्देशन दिइएको छ । हिजो के भयो त्यो छोडदिनुस् अब कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि व्यवस्थित र द्रुत गतिमा काम गर्नेछ भनी म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । कहाँकहाँ कमी कमजोरी छ, छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं । मल नै ल्याउन सकेन, वितरण प्रणाली राम्रो बनाउन सकेन भने कम्पनी किन चाहियो ? टेन्डरका लागि नै कम्पनी चाहियो भने मन्त्रालयको कुनै महाशाखाले पनि टेन्डर गर्दिन सक्छ ।
म पनि नेपालको कृषि प्राङ्गारिक प्रणालीमा नै जानुपर्ने मान्यता राख्छु । धान, मकै, गहुँ, कोदोको जुन उत्पादन छ, अरू देशको तुलनामा धेरै नै कम छ । उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको पर्याप्तता हुनुपर्छ । त्यसबाहेक तरकारी खेती, फलफूल खेती, नगदे बालीका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ । देखिने गरी प्राङ्गारिक मलका लागि प्याकेजमा काम हुँदैछ । हामीले दुुइटै दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । खाद्य सुुरक्षाका पनि रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीसँग एक करोड १५ लाख मेट्रिक टन धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायतका खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ तर अहिलेको जनसङ्ख्याका लागि ९६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भए पुुग्छ । हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी खाद्यान्न छ । तर, नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन आएको हुनाले अभाव देखिएको हो । मसिनो, वास्नादार चामल बढी खाने बानी बढेको छ । त्यही धान उत्पादन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले काम गरिरहेको छ । हाम्रो खेतबारीमा मोटो र खस्रो धान उत्पादन भइरहेको छ । त्यो उत्पादनमध्ये केही बाहिर गइरहेको छ भने केही दानाका लागि प्रयोग भइरहेको छ । पहाडी जिल्लामा लोकल रक्सी बनाउने काम पनि भएको छ । आयात घटाउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसका लागि रासायनिक मलको प्रयोग ह्वात्तै छाड्न मिल्दैन त बिस्तारै प्राङ्गारिक खेती प्रणालीतिर नै जानुपर्छ । रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल एउटा सिक्काका दुुई पाटा हुन् । यी दुुइटै पाटालाई हामीले बराबर महŒव दिएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर त्यसका लागि सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ ।